तिनीहरूले आफ्नो नवजात शिशु हेर्न गर्दा धेरै आमाबाबुले छोयो छन् बच्चा एक औंला चूसने आफ्नो निद्रामा। तर पछि, बच्चालाई दुई वर्षको हुँदा, र उहाँले अझै पनि यो बानी दिन सक्दैन अप, प्रशंसा फिक्री बदलिएको। गरेको बच्चाको औंठी sucking कसरी wean गर्न हेरौं।
अझै पनि गर्भमा, बच्चालाई आफ्नो औंला चूसने, र, जन्मेको भएको बेला, उनले गर्न "राम्रो" गतिविधि, यो आफ्नो soothes किनभने, कम पनि अक्सर एकाकीपनको भावना, यो यस्तो पेट ऐंठन रूपमा शारीरिक दुखाइ, हटाउन मद्दत गर्छ खडा जारी, र पनि स्नेह र ध्यान घाटा भरिन्छ।
शैशवकालदेखि मा मुख्य - चूसने सहज क्रिया। , खाना को एक भाग कम प्राकृतिक तरिकामा प्राय उसलाई खुवाउन पर्याप्त - आमा ढिलो बच्चालाई breastfeed भएनन् भने बच्चाको औंठी sucking wean कसरी को प्रश्न, धेरै बस हल गर्न सकिन्छ।
खराब बानी को कारण
बच्चा एक वर्ष उत्तेजित गर्दछ, त्यो बिस्तारै आफ्नो शौक देखि wean सुरु गर्नुपर्छ। तर, बच्चा उनको औंला चूसने रोक्न छैन अझै पनि पुरानो छ भने, तर, त्यसपछि यहाँ सम्भव कारण एक सूची छ:
1 अति तेज वा प्रारम्भिक निहत्था।
2. बच्चा सुत्न वा केही केन्द्रित चाहन्छ।
3. बच्चाले एक बानी गठन भएको छ, यो त्याग्न गाह्रो छ।
4 मेरो आमा बच्चा एउटा सानो ध्यान छ।
5 उहाँले उत्साहित छ वा उहाँले स्नेह अभाव सजग।
6 गर्नुभएको बच्चा कुरा को धेरै भयभीत र बच्चाको tantrum दबाउन प्रयास गरिरहेको छ।
औंठी-sucking को नतिजा
समय समयमा औंठी sucking खींच बाल, परेलाहरु, टाउको, पेट मा pats संग हुन्छ। तपाईंको pipsqueak आफ्नो मुख पुल गर्न सक्नुहुन्छ, र अन्य वस्तुहरू, उदाहरणका लागि, एक कुनामा कंबल, मुलायम खिलौने वा पन्जा प्याड।
डाक्टर को भनेर विश्वास औंठी-चूसने बच्चा एक वर्ष भन्दा पुरानो तल्लो चिबुक, दाँत एक झुकाव, को विरूपण सक्छ malocclusion। त्यसैले wean कसरी प्रश्न उनको औंठी चूसने एक बच्चा, सबैभन्दा लागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
आफ्नो धेरै छन्। त्यसैले, कसरी उनको औंठी चूसने बच्चा wean गर्न? लाज हरेक तरिकामा बारेमा यो कसरी खराब कुरा गर्न, सजाय, भयभीत कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैले तपाईं मात्र गहिरो बच्चा मा खराब बानी ठीक। चूसने अझ कोमल तरिका औंठी wean गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सबै को पहिलो, बच्चा कारण विचार दिन। कसरी ठीक? उहाँलाई खेल्न, सँगै झुक्काएका, उहाँलाई गले र बच्चा को लागि लोरी गाउन। दोश्रो, कसैसित कुरा बाहिर क्रमबद्ध गर्न प्रयास छैन र उसलाई भ्कगडा गर्न। घरमा खराब मनोवैज्ञानिक वातावरण - मुख्य तनाव को कारण छोराछोरीलाई। तेस्रो, यो बच्चा थप विश्वस्त महसुस गर्न मद्दत गर्छ किनभने, स्तन-रुचाउने को अवधि बढाउन। चौथो, मुड रहिरहन्छ राख्नुहोस्। डर र चिन्ता गर्न समय सूचना, बच्चालाई calms। पाँचौं, निरन्तर उहाँको छोरा ध्यान विचलित, खराब बानी कुरा छैन। यो सबै मेटिने गर्नुपर्छ - तर्साउने, कार्य र थ्रिलर्स: छैटौं, बच्चा देखिन्छ कि, चेक अप। सातौं, को बच्चा को चासो को दायरा वृद्धि: चिडियाखाना, को सर्कस वा एउटा चलचित्र उसलाई जान्छन्। र आठौं मा, बच्चा उनको मुखमा उनको औंला सोता भने, सावधानी यसलाई हटाउन।
चाँडै भयो गरेका उनको औंठी चूसने बच्चा wean परिसर मा यी सुझावहरू सबै पालन गर्न निश्चित हुनुहोस्।
Hysterical neurosis: को illusory रहस्य
"नीना रिची एक्स्टैसी": सुगन्धको वर्णन, मूल्य, समीक्षाहरू
रूसी जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय), मास्टर गरेको: आय विशेषताहरु, परीक्षाहरू र समीक्षा
हातमा रातो स्थलहरू। तिनीहरू किन उत्पन्न गर्छन्?
औषध "मैगनीशियम कार्रोप्नेट" र "म्याग्नेसियम सल्फेट '
को सह-चलान के हो? प्रकार र सहकारी को विशेषताहरु